အနည်းငယ်အငြင်းနိုင်ပါကျော်လွန်ခဲ့နှစ်အနည်းငယ်အဘို့အဝယ်လိုအားအတွက်အကြောင်းအရာအသင်ျနယ်ပယ်သည်သွားသည်အိမ်ခေါင်မိုးမှတဆင့်။ ယနေ့တွင်၊ငါလိုအကြောင်းပြောဖို့ငါအဖွဲ့၏အလှူမှအ fetish:ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဂိမ်းမြှုပ်နှံရန်မိသားစု-အာစုတ်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်အပေါ်သင်ျလိင်ဂိမ်းများ ၃ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊ဒါပေမဲ့တကယ်ယူကအလေးအနက်ပြီးခဲ့သည့်အတွက် ၁၂ လများအခါကျွန်တော်သဘောပေါက်ရုံမည်မျှလိုအဲဒီအာကာသ။, သာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ၏အစွန်းရောက်အဆင့်ဆင့်တောင်းဆို၊ဒါပေမယ့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဝေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသငျသညျအဘယျသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါခံရဖို့အသင့်လျော်–သင်ရုံမပေါ်တွင်သင့်လက်ကိုရရန်အလွန်ကြီးစွာသောသင်ျဂိမ်းများဤသည်နေ့ရက်ကာလ! အကြောင်းဖြစ်သည်၊မဟုတ်လျှင်၊သင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒီမှာသင်ျလိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြတိုက်တစ်ဒေတာဘေ့စ၏သီးသန့်ဂိမ်း(ဘယ်နေရာမှာမဆိုမရရှိနိုင်)ဖြစ်ကြောင်းအချုပ်သမားကိုဖန်ဆင်းဖို့သင်ကူညီနှင့်အတူသင့်ရဲ့ masturbatory အလိုဆန္ဒ။ ဒါကြောင့်၊ကိုဖမ်းဆီနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချို့ဆှဂိမ္းအရေးယူဖို့လူသိများ။ ဆိုရင်အတော်ပင်သူတစ်ဦးသင်ျလှုပ်ရှားမှုအတွက်၊ဒီအချက်ဟာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်!, ပြောကြရကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယိုနှင့်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အားလုံး၏ကြွင်းသောအရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုတော်တော်ရှည်၊ငါတို့မူကားဖြစ်လိမ့်မယ်သေချာဖြည့်စွက်ရန်သင်မှာအားလုံးအပေါ်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်ပို့စ်-ဆော။
အမှုအရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်သတိထားမိအတော်လေးစောစောအပေါ်အကြောင်းညမ်းဂိမ်းအာကာသကအလွန်အနည်းငယ်ခရီးစဉ်ဒေသခဲ့ရည်အသွေးမြင့်မားဂရပ်ဖစ်။ သူတို့အနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရပေးအရည်အသွေးကောင်းဖော်ရန်အဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့မြှုပ်နှံတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသေချာရကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမြင်သောမှုတ်တခြားလူတွေအထွက်ရေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချိန်ကြာမြင့်စွာသွားပြီး၏ကာလများမှာအားလုံးသင်ျညမ်းဂိမ်းများထွက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်တည်ဆောက်မီးေလးေရအဘယျသို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလိင်ခေါင်းစဉ်နဲ့တူလှပါတယ်။, ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးပြီအားလုံး၏လွှတ်ပေးမှုအပေါ်အညီညွှတ်ရေးအင်ဂျင်နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလေသည်၊ရိုးရှင်းစွာကြောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းညမ်းဂိမ္းချမ်းသာဘဲဖြတ်တောက်မည်သည့်ထောင့်။ တစ်လျှောက်လုံးဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်၊ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုး၏၊ဟူသောအသီးအသီးဆောင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့်စတိုင်မှထုတ်လုပ်မှု။ အနုပညာကလစ်နှိပ်လိုက်မှအောင်မြင်မှုများလည်းဖန်တီးအိမ်-နှင့်သီးသန့်ရှိပါတယ်ချိုးဖဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုအနှံ့လာ။, ဒါကြောင့်တစ်ခုခုရဲ့အကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်မေတ္တာကိုလုပ်နေတယ်နှင့်ရိုးသားဖို့သင်တို့နှင့်အတူကရှင်းလင်းတဲ့အခါသင်ကြည့်ရှုအခြားဆိုက်များထွက်ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်များမှာ။ မယူကြဘူးငါ၏တရားစကားတော်သည်က၊သော်လည်း–အလာအပေါ်နှင့်ကွာခြားချက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သောလုပ်!
ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များ ၁၁ ဂိမ်းသင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အားကစား၊ထိုသို့သတိပြုသင့်ကြောင်း၊ဤသည်အလွန်ကြီးရေရှည်စီမံကိန်းပုံစံမည်မဟုတ်ချောနှင့်အတူအလျင်အမြန်။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းသွားဖို့စတင်ထံမှပြီးမှအတွက် ၅ သို့ ၁၀ နာရီ၊ဒါပေမယ့်သဘာဝကျကျ၊ထိုလှုပ်ရှားမှုစတင်သည်နှင့်အများကြီးနှေးနဲ့အမြန်ထက်သော၊ဒါကြောင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်မှချရနိုင်ရန်အ nitty gritty နှင့်ရှုပ်များချွတ်မီမှုအရလည်းပြင်းထန်ကြောင်း၊တစ်ဦးရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရရှိနိုင်သောအများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အခေါင်းစဉ်။, အခုတော့၊ကြီးစွာသောအရာကထုတ်လုပ်အားလုံးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းအကြောင်းသင်သည်တတ်နိုင်အားလုံးဖုံးလွှမ်းအခြေစိုက်စခန်း၏၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းထည့်သွင်းသူဌေး၏အရောအနှော၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်သင်ျ။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် daddies နှင့်သမီး၊မိခင်နှင့်သား၊အစ်ကို၊မောင်နှမ၊အဒေါ်နှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်အကြား။ အချို့သောဂိမ်းများပင်ကွဲပြားခြားနားသောအ storylines ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းပြောင်းသည့်စာလုံးပေါ်လာရှိရာ၊စိတ်ကြိုက်အသင်ျ၏အတိအကျအလိုဆန္ဒနှင့်အသေးစိတ်။ နေစဉ်၊အနည်းငယ်ခေါင်းစဉ်အလွန်ကြီးဖြင့်မောင်းနှင်စကားနှင့်ရွေးချယ်မှု၊အခြားသူများများအတွက်ရွေးချယ်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်လိင်ချဉ်းကပ်မှုသင်ရလိမ့်မည်ဟုထဲသို့ကြမ်းတွေမယုံနိုင်လောက်အောင်အလျင်အမြန်။, ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်အလမ်းကြောင်းကိုသင်တို့အလိုသို့ဆင်းသွားသောကြောင့်၊နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများအပေါ်ဇယား၊သင်အမှန်တကယ်အမျိုးရွေးချယ်မှုနှင့်အပြင်သွားများအတွက်အဘယ်အရာကိုသင်လို။ တော်တော်ချိုမြိန်စာချုပ်၊လက်ျာ? နှင့်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်တာပေးခြင်းကအားလုံးကိုပယ်ရှားသည်အခမဲ့? မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်!
စားရဘူးလိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲညမ်းဂိမ်းများများထံသို့တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ? လုံးဝနားလည်–ကျွန်တော်သိသောအန္တရာယ်များရှိနေပါသည်နှင့်အတူဆက်စပ်နေကြောင်းကတည်းကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်မတိုင်မှီကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ယူချင်ကြပါဘူးဆိုအပ်သောအန္တရာယ်များတဲ့အခါသူတို့ရိုးရိုးမလိုအပ်။ သတင်းကောင်းကတော့သင်ျလိင်ဂိမ်းများရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ကမ်းလှမ်းအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတဆင့်တိုက်ရိုက်ဘြတ္၊ဒါကြောင့်သင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ပြေးနေမကြာသေးမီကထုတ်ဝေသောမြေခွေး၏၊ရှု၊အရှင် Chrome၊သင်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်၊မည်သည့်အရေးကိစ္စများပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းသည်အဘယ်အရာကိုသင်အလိုရှိသော။, ဒါဟာလည်းပညာအကြောင်းဖော်ပြထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာက္ဇာအာရုံစိုက်ထုတ်လုပ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်အစက်အဟောင်းတွေနှင့်အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ။ အသက်သာဖြတ်ပြီးအားလုံးကိရိယာများကိုလည်းတစ်ချိန်တည်း၊ဒါကြောင့်သင်ရှိသည်မည်မဟုတ်သည့်အခါကိစ္စရပ်များကိုလှန်တစ်ခုမှအခြား။ တော်တော်အေးမြ၊အယ်? ပဲနောက်ထပ်ခြေလှမ်းယူကြောင်းသေချာစေရန်ထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းခံစားသည်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူမဟုတ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ရရန်အဘို့အဘယ်မှာအခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ယုံကြည်ခဲ့သည်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ Anyhow–အလုံအလောက်စောကအခက်အခဲ။, အားလုံးကျွန်တော်လုပ်ချင်သောသေချာစေသင်ပယ် jerking အကောင်းဆုံးသင်ျညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း၊မှန်သော?
လက်လှမ်းသင်ျလိင်ဂိမ်းများလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်အစဉ်အမြဲလိမ့်မည်၊သငျသညျဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဤနေရာသို့သွားရန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အဘယ်အရာကိုမြင်မှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကမြင့်မားတဲ့အကြောင်းအကြံပြုလာတပ်ဆင်ထားနှင့်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောငွေပမာဏဆေးနှင့်တစ်ရှူးသော်လည်း၊–သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးအပေါ်ကိုတက်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်စီမံကိန်းနှင့်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သောတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အချိန်အတွင်း။ စောင့်ရှောက်မှုယူကျနော်တို့သင်ကိုမြင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါအားလုံးကြယ်ကမ်းလှမ်းဂိမ်းများအားဖြင့်သင်ျလိင်ဂိမ်းများ။